Apple Mepu Transit Mafambiro Anosvika muSeattle | IPhone nhau
Apple Mepu nzira dzekufambisa dzinosvika Seattle
Apple nezuro yakagadzirisa yayo Mepu Wedzera ruzivo rwemotokari kunzvimbo yeSeattle, Washington. Kubva ikozvino zvichienda mberi, vashandisi vanogara munzvimbo iyi vanozokwanisawo kutsvaga nzira dzekutakura vanhu dzakadai sezvitima, matramu, mabhazi uye mamwe marudzi ekufambisa pavanenge vachiita tsvagiridzo yavo, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chakakosha kwandiri mumaguta ane kukura uye huwandu hwevanhu vanokoka isu kushandisa rudzi urwu rwekufambisa kukuvadza mota yedu pachedu.
Mafambiro etraffic mukati meApple Mepu akasvika pane iyo iPhone, iPod Touch uye iPad munaGunyana apfuura pamwe neIOS 9. Pakutanga, Tim Cook nekambani vakangopa rudzi urwu rwezvinyorwa mune mashoma maguta, asi iyi nhamba yakawedzerwa kusvika huwandu hwegumi nematanhatu pasirese uye gumi nemaviri muChina, nyika yakave nebasa rekukura kwazvino kwekambani yeCupertino.
Maguta anowanikwa neApple Mepu Transit mafambiro
Montreal neToronto, Canada
New York Guta
Maguta mazhinji muChina
Iyo peji kwavakaisa mune nyika idzo sevhisi inowanikwa iripo haisati yagadziriswa nekuwedzera Seattle, asi inofanira kunge iri chero nguva. Pamusoro pekuti basa iri rinosvika riini mune dzimwe nyika, hapana mutauriri weApple akataura chero chinhu nezvazvo, saka zvinogona kunge zviri mwedzi kana gore risati rasvika kuSpain. Rondedzero yacho inosanganisira guta rinotaura chiSpanish, Mexico City, saka ivo vanokwanisa kuwedzera maguta matsva muMexico mune iri kure kure remangwana. Dzimwe nyika hadzina imwe sarudzo kunze kwekumirira kana kushandisa makwikwi emakwikwi. Pane mumwe akati Google Mepu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Mepu nzira dzekufambisa dzinosvika Seattle
Android N iri kutogadzirira kuchinjika kune 3D Kubata